Grab Aims to Change Cab Hiring Culture in Myanmar | Myanmar Business Today
Home Business Local Grab Aims to Change Cab Hiring Culture in Myanmar
Grab Aims to Change Cab Hiring Culture in Myanmar
Taxi bookings throughamobile app debuted in Myanmar in late 2015. Since then, four years have passed but online taxi bookings have yet to replace the old-fashion taxi-taking culture in whichacustomer would stand beside the road to hailacab and negotiateafare with the driver.
When the service was first introduced, it could not attract customers, who preferred to bargain the fare rather than accept an app-calculated one, which they assumed would be higher than what they could negotiate themselves. On its debut, the taxi booking services charged nothing for service, but customers were required to pay K1,000 once they get in the cab.
Needless to say, the booking services failed to change Myanmar’s decades-old taxi hiring culture. Moreover, most, if not all, people in Myanmar use their smartphones for Facebook, mobile games and other entertainment apps, not for digital services that make life easier.
Enter Grab Taxi, which allows users to see the fixed price for their ride before they book. The company seesahuge market in Myanmar.
“When we launched GrabTaxi in 2017, ride-hailing and using smartphones to book taxis was stillanew concept in Yangon,” Cindy Toh, Country Head of Grab Myanmar, told Myanmar Business Today. “Over the past two years, we have seen how rapid adoption of mobile-led services such as Grab has shifted the way Myanmar access everyday services, including their transport needs.”
Aside from the in-app safety features and passenger and driver education efforts, she said that Grab has raised the bar for safety standards of the overall transport industry in the region. Across all markets where it operates, Grab is working with local governments and government agencies to develop road safety initiatives under the Safer Everyday commitment, said Ms. Toh.
For the benefit of its driver-partners, Grab will introduce programs such as No Credit, No Problem, Silver Tier Benefits Program and priority recruitment of driver-partners’ children for part-time jobs with GrabFood.
Grab collectsa20 percent commission on all rides booked through its platform. The purpose of the commission policy, Grab said, is to boost service quality withastandard commission charged to all driver-partners.
Ms. Toh said that Grab will continue working with the driver community in Yangon to improve their lives with increased passenger bookings and income as well as offer training sessions so that they can improve service standards.
Grab also helps its driver-partners to openabank account at CB Bank, which isapartner bank of Grab Myanmar, and invests in providing customer service and English training to Grab’s call agents to ensure that they can support all driver-partners and passengers with their requests and to resolve issues.
Grab’s driver-partners often find customers on their own and only use the Grab app when they can’t find one. This is because they don’t like to use the promo code, which deductsacertain amount of the fare, or to wait for payment for the ride used by customers whose employer pays for the fare.
“In addition to helping driver-partners receive more bookings for more earnings, Grab continues to introduce new features such as the ‘Cash Out’ feature launched earlier this year,” said Ms. Toh. “This feature is available in the Grab Driver App to allow driver partners to easily cash-out their earnings ataCB Bank ATM at any time of the day.”
Each driver-partner is assignedatier status according to weekly rides completed, passenger rating andaclean road safety record, with Platinum as the highest tier, followed by Gold and Silver. At driver appreciation events, Grab presents awards to driver-partners who achieved significant results, the top drivers in road safety as well as those who provided 5-star customer service.
In 2020, Grab’s driver-partners will be provided with more benefits and new product features to further enhance their driving experience with Grab. The new benefits include Grab Credit Top Up Card, Grab Driver Wallet Top Up using CB Pay and Compulsory Selfie Verification for Passengers for the safety of driver-partners.
To provide corporates, organizations and the hospitality industryanew option to rent premium vehicles for hourly and daily use within Yangon townships, Grab launchedabeta service on October 1 named ‘Premium Rentals from Grab’.
More than 300 companies in Myanmar use Grab for Business services for corporate travel. They include private, public and multinational companies from various industries including fast-moving consumer goods, professional services and media companies operating in Yangon and Mandalay.
တက္ကစီ လက်တားငှားအလေ့အထကြားက ရုန်းထွက်နေသည့် နည်းပညာပလပ်ဖောင်း(သို့မဟုတ်) Grab Ap
မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် တက္ကစီငှားရမ်းနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၅ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှစတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သော်လည်း ငှားရမ်းအသုံးပြုသူမှာ နည်းပါးသည်။ ယခင်အတိုင်း လမ်းပေါ်ထွက် ပလပ်ဖောင်းပေါ်ရပ်လက်တားသည်။ထို့နောက် ဆိုက်လာသည့်တက္ကစီကို ဈေးမေးဈေးဆစ် ကားမောင်းသူနှင့်စီးသူကြားကိုက်သည့်ဟူသော အခြေအနေဖြင့် တက္ကစီငှားသည့်အလေ့အထကရှိနေဆဲ။
ထိုအချိန်တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် တက္ကစီငှားရမ်းသည့် စနစ်တွင် ခရီးသည်အနေဖြင့် appမှ တစ်ဆင့်တက္ကစီငှားရမ်းသည့်အတွက် ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း ခရီးသည်အနေဖြင့် ယာဉ်ပေါ်သို့ရောက်ရှိပြီဆိုပါက ကနဦးအနေဖြင့် ၁၀၀၀ကျပ်ကို စတင်ပေးဆောင်ရ မည်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်စီးခနှုန်းထားကောက်ခံရာတွင် မီတာစနစ်ကို အသုံးပြုကောက်ခံကာ မိမိသွားလိုသည့်ခရီး၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို ဖုန်းapp မှ တွက်ချက်ပေးသည့် စနစ်ကို ခရီးသည်များအနေဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်မှု မရှိသည့်အတွက် သုံးစွဲသူနည်းပါးခဲ့သည်။
ဝန်ဆောင်မှုမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် အလွယ်တကူငှားရမ်းနိုင်သော်လည်း ဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ ဈေးဆစ်၍ မရနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ပေ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက္ကစီများကို လက်တားငှားရမ်းခြင်းမှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် အရိုးစွဲလျက်ရှိနေသည့် အကျင့်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲရန် ထင်သလောက် လွယ်ကူမှုမရှိဘဲ မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် တက္ကစီငှားရမ်းနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူမှာလည်း ထင်သလောက် မရှိခဲ့ပေ။
မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုများမှာ Facebook ၊ မိုဘိုင်းဂိမ်းများနှင့် အခြားသော အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုသည့် ပမာဏမှာ မြင့်တက်နေပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာကို ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သူများမှာ နည်းပါးနေသေးသည်။
ထိုကဲ့သို့ အသုံးပြုသူနည်းပါးနေချိန်တွင် ကြာမြင့်ချိန်နှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများအတွက် ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ ပုံသေဈေးနှုန်းကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ပြီး ခရီးသည် ကြိုက်နှစ်သက်ပါက စီးနင်းနိုင်သည့် Grab Taxi သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။
“ကျွန်မတို့ ဝင်ရောက်လာတော့ ပြည်သူတွေက စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုပြီး ကားငှားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရင်းနှီးမှုမရှိခဲ့ဘူး။ တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲကို ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ အခု နှစ်နှစ်ကြာမြင့်လာပြီးနောက်မှာတော့ မိုဘိုင်းဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အသုံးပြုနှုန်းက ယခင်ထက် တိုးတက်လာပါတယ်” ဟု Grab Myanmar မှ Country Head ဖြစ်သူ Cindy Toh က Myanmar Business Today ကို ရှင်းပြသည်။
Grabကို မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် တက္ကစီငှားရမ်းနိုင်ရုံသာမက လိုက်ပါစီးနှင်းသူများ လုံခြုံမှုရှိစေရန် အာမခံချက်ပေးထားသည့်အပြင် ဒေသခံအစိုးရအဖွဲ့စည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
တစ်ဖက်တွင်လည်း Grab နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ယာဉ်မောင်းများစွာအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းပေါင်းများစွာကို ဖန်တီးပေးထားနိုင်ပြီး ငွေအဆင့်(Grab ကသတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်မောင်းအမျိုးအစား) မိတ်ဆက်ယာဉ်မောင်း များအတွက် အကျိုးခံစားနိုင်ခြင်း၊ မိတ်ဖက် ယာဉ်မောင်းများ၏ သားသမီးများကို ဦးစားပေး၍ GrabFood တွင် အချိန်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးလျက်ရှိသည်။
Grab Appမှတစ်ဆင့် ယာဉ်မောင်းများကို ခရီးစဉ်ရှာဖွေပေးရသည့်အတွက် ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းလျှင် ယာဉ်မောင်းထံမှ ၂၀%ကို ကော်မရှင်ခအနေဖြင့် ကောက်ခံလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ ကောက်ခံရရှိသည့် ငွေများဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်း၊ အခြားသော လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးနှင့် နည်းပညာအသစ်များ ဖန်တီးရာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ ပြန်လည်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ထို့ပြင် ယာဉ်မောင်းအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ယာဉ်မောင်းများ ဝင်ငွေတိုးပွားလာစေရန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အရည်အသွေး ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်အတွက်လည်း သင်တန်းပို့ချခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။
ယာဉ်မောင်းများအတွက် ဘဏ်အကောင့်များဖွင့်ပေးခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ် ဂေဟစနစ်သို့ ခေါ်ဆောင်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးသည့်အပြင် မိတ်ဖက်ယာဉ်မောင်းများနှင့် ခရီးသည်များ၏ တောင်းဆိုမှု အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် Call agent များအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းပို့ချပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။
သင်တန်းပို့ချပေးမှုများပြုလုပ်ပေးနေသော်လည်း ယာဉ်မောင်းအများစုသည် လမ်းမများပေါ်တွင် လက်တားငှားရမ်းသည့် ခရီးသည်မရရှိမှသာ Grap Appကို ဖွင့်ကာ ခရီးသည်များကို ရှာဖွေလေ့ရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နေရခြင်းမှာ ခရီးစဉ်များအတွက် ပေးချေသည့် ငွေသားများသည် လက်ငင်းငွေပေးချေမှုများရှိသော်လည်း ပရိုမိုကုဒ်များဖြင့် စီးနှင်းသည့် ခရီးစဉ်များ၊ ကုမ္ပဏီမှ ပေးသည့် ငွေပေးချေမှုဖြင့် စီးနှင်းသည့် ခရီးစဉ်များအတွက် ငွေစောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ဒီလိုငွေကြေးစောင့်ဆိုင်းရတဲ့ ပြသာနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ ဝင်ငွေကို အချိန်မရွေး ထုတ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် CB Bank ရဲ့ ATM စက်တွေမှာ ချက်ခြင်းငွေထုတ်ယူနိုင်မယ့် “ချက်ချင်းလွှဲ ချက်ချင်းရောက် “ အစီအစဉ်ကို ယာဉ်မောင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှာ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်” ဟု Grab Myanmar မှ Country Head ဖြစ်သူ Cindy Toh က MBT သို့က ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြောသည်။
ဒါ့အပြင် မိတ်ဖက်ယာဉ်မောင်းများ ပိုမိုများပြားလာစေရန်အတွက်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့် ဘွတ်ကင်(ကြိုတင်အမှာ)လက်ခံမှု၊ ဖျက်သိမ်းမှု၊ ခရီးစဉ်အကြောင်းရေး ပြည့်မီမှုများအတွက် ဆုကြေးပေးအပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးသည့်အပြင် အပတ်စဉ်မောင်းနှင်သည့် ခရီးစဉ်အကြောင်းရေ၊ ခရီးသည်မှ ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း၊ ပြစ်မှုကင်းရှင်းခြင်း အစရှိသည့် အချက်များပေါ်မူတည်ကာ ပလက်တီနမ်အဆင့်မှ ရွှေ၊ ငွေအဆင့်များ သတ်မှတ်ကာ ကြယ်ငါးပွင့် အဆင့် ရရှိသည့် ယာဉ်မောင်းများကို ဆုချီးမြှင့်ပေးလျက်ရှိသည်။
၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် ယာဉ်မောင်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အတွေ့အကြုံအသစ်များ ရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်ဖြစ်သည့် Grab ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်၊ CBPay အသုံးပြု၍ Grab Driver Wallet အတွက် ငွေဖြည့်နိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်၊ မိတ်ဖက်ယာဉ်မောင်းများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် ခရီးသည်၏ ဆယ်ဖီဓာတ်ပုံနှင့် အတည်ပြုထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖန်တီးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Grab အနေဖြင့် တက္ကစီငှားရမ်း အသုံးပြုလိုသူများအတွက်သာမက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းများတွင် နာရီအလိုက် ငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်သည့် Grab Premium Rentals [Beta] ဝန်ဆောင်မှုကို ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် Grab for Business ကို အသုံးပြုနေသည့် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၀၀ကျော်အထိရှိပြီး ယင်းကုမ္ပဏီများထဲတွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် FMCG ကုမ္ပဏီများ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ မီဒီယာကုမ္ပဏီများ၊ အစိုရ ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီများမှ Grab နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
Grab သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် Uber၏ အာရှနိုင်ငံများရှိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် အငှားယာဉ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အစားအသောက် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။
Previous articleBRINGING OUT SMILES ON MYANMAR CHILDREN’S FACES
Next articleHomestays: Finding Comfort inaStranger’s Home